Philippe Coutinho oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka mid ka mid ah saxiixyada cusub ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 10 Okt 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka ay isku wadanka yihiin Arthur Melo inuu yahay xidig aad u wanaagsan.
Arthur Melo ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kala soo muuqday xili ciyaareedkiisa ugu horeeyay ee kooxda Barcelona, wuxuuna taas badalkeeda amaan xoogan ka helay Philippe Coutinho.
“Arthur Melo waa ciyaaryahan weyn, waana ku faraxsanahay inaan la ciyaaro isaga, wuxuu kooxda ka dhigaa inay si fiican u ciyaarto”.
“Isagu waa dhaqaajiyaha kooxda, si fudud kubada kuma luminayo, wuxuu nasiiyaa baasas aad u fiican, waa xidig khad dhexe ee aad u wanaagsan”.
“Waxaan horumarineynaa qaabkeena horyaalka Spain, waxaana kaga bilaabanay si aad u fiican tartanka Champions League, waa run inaanan guuleysan 4 kulan xiriir ah, laakiin waa wax iska caadi ah, wali xili ciyaareedka waa mid aad u fog, waxyaabo badan ayaana dhici doona”.
Si kastaba Arthur Melo ayaa ku yimid kooxda Barcelona aduun dhan 40 milyan euro, wuxuuna saxiixay heshiis 6 sano ah, si uu qeyb kaga noqdo khadka dhexe kooxda Barca, xili ciyaareedkiisa ugu horeeyay ayuuna si qurux badan kaga soo muuqday.